Easy Montana, murume akafunga nezve doppelganger yaDJ Arafat inoita chiratidzo chakashata paArafat - teles relay
Easy Montana, murume anofungidzirwa saDJ Arafat kaviri nekuda kwekufanana kwake nemuimbi, achangobva kuita zvakazarisisa zvinoshamisa mazuva mashoma kupemberera gore 1 rekufa kwaYorobo.
Munguva yehupenyu hwaDaïshi, pakanga paine vateveri vazhinji vaiita zvese kuti vave saiye nekutora maitiro ake emapfekero uye maitiro. Nekudaro, pakanga paine mumwe kunyanya aive ari lowight his double. Iro zita rakareruka Montana. Kufanana neiyo Yorobo kunoshamisa.
Aya mamiriro, kure nekumufadza, hazvina kufadza Easy Montana zvachose. Akazoedza kuchinja muviri wake nemaitiro ake kuti azviyanise kubva kune muimbi. Asi hapana chakabatsira.
"Zvakawanda kwazvo zvekuti zvakandishungurudza kuti ndakagara ndichiudzwa kuti ndiri Arafat kaviri, ndakapinda munzvimbo yekutamba kuti ndiite chimiro, ndakarega bvudzi rangu rikura kuti riite madhiri uye ini ndokuita kuboora pamhino dzangu asi izvo hazvina kuchinja chero chinhu ", akapupurira Chipiri uyu, Chikunguru 28, 2020 panguva yePeopl'Emik show yeLa 3.
Nekudaro, chinonyanya kushamisa chasara kuuya. Chokwadi, maererano naRean Montana, zuva rekufa netsaona raArafat Dj musi waNyamavhuvhu 12, aive kuGhana. Ainge aronga zvekuita na Commander Zabra pakudzoka kwake. Uye sechiratidzo chemhedzisiro, pazuva remutambo, mukurota kwake anozviwana aine Arafat DJ wepati yekutamba.
“Pandakapepuka, ndakaenda kunodzikamisa muchimbuzi. Asi pandakadzokera kuhotera yangu yekurinda, ndakanzwa kuvepo kwakasimba kweDaishi. Handizive kana izvi zvakamboitika kwauri asi ndainyatsonzwa kuvapo kwake. Ini ndobva ndati mumoyo mangu, ini pandiri kuAdidjan tichaita chaizvo izvi.
Ndipo pandinomuka ndinotora foni yangu ndione chimiro chaArafat kwese kwese ndoverenga Arafat ndine hurombo usaite izvozvo kwatiri. Handina kutenda. Apa ndipo pandakaziva kuti ainyatsondishanyira", Akadaro.
Izvi zvakazarurwa zvinouya mazuva mashoma kusati kwasvika kurangarira kwekutanga gore rekufa kwaDJ Arafat uye ratove kukonzeresa maitiro akawanda pawebhu.
Ichi chinyorwa chakatanga kuoneka pa: https://afriqueshowbiz.com/easy-montana-fait-une-terrible-reRev-arafat-ma-visite-au-ghana-le-jour-de-sa-mort/
Easy Montanamurume anoonekwa saDJ Arafat anotaridzika anoita pachena anotyisa nezveArafat